Shir sannadeedka Bentley, oo leh qaab cusub - Geofumadas
Abriil, 2008 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Sannadkan sannadkan shirwaynaha Bentley, ee lagu qabto Baltimore, ayaa isbeddelaya qaabka caadiga ah ee kulamada Bentley Institute. Xaaladdan oo kale, ayaa lagu kala khadadka mowduuc, halkii ay wax soo saarka gaar ah, sidaa darteed waxa laga yaabaa in aad aragto jilidda biyaha loo isticmaalo design la Solutions Heastad, design ee dhismaha buundada ee hal-gaadhista ah hadalka ku saabsan design buundada, Isticmaalka STAAD, maamulka xogta ee Project Wise, jilitaanka 3D ee Mashruuca iyo xitaa daabacaadda natiijooyinka la daabacay GeoWeb.
Inta badan ama ka yar ajandaha waxaa loo kala soocayaa khadadkaas mawduuca ah:
In line of Architecture iyo Naqshad Dhismeedka
BIM iyo wax kale (Dhisme)
Gaadiidka Qaabka (BrIM)
In line of Geoengineering
Kobcin iyo horumarinta dhulka
In line Warshad
Dhirta iyo macdanta
In line of nidaamka qaybinta
Gaaska / korontada iyo tamarta wax soo saarka
Hadda, waxaan go'aansaday in aan raaco ajandaha koorasyada iyo horumarinta dhulka, inkasta oo aan xiiseyn doono inaan arko waddooyin dhowr ah.
Dhacdooyinkaas mid waa inuu caddeeyaa inuusan baran doonin, laakiin inuu awood u yeesho in uu awood u yeesho ujeedooyinka halka ay tiknoolajiyadu u socdaan, si loo helo aragti.
Waxaa ka mid ah xeeladaha ugu fiican ee shirka waa in aanay riixaya loogu talagalay dadka si ay u qaataan diblooma dhamaadka tababarka, iyo farsamo in aan la shaqeeyo iyaga badan sababtoo ah qof walba inuusan xiiseyneynin inuu ku credits of Institute Bentley waqti sidaas qiimo leh Sidaas daraaddeed way u doortay si ay u muujiyaan waayo-aragnimo wax ku ool ah ee codsanaya teknoolajiyada ay ... iyo tagaan in ay fiican tahay, maxaa yeelay, aad wax dheeraad ah maxaa yeelay, sida ay sameeyeen in la dhageysto sigaar cabbin aragtida.
Marka laga hadlayo aagga juqraafiyeed, mid ka mid ah bandhigyada ugu muhiimsan ayaa masuul ka ah Mark Reichardt, madaxweynaha iyo agaasimaha OGC (Open Consortium Consortium), oo ah hay'ad muddo dheer ka shaqaynaysay kobcinta heerarka isdhaafsiga macluumaadka geospatial. Sidaa awgeed, soojeedintiisa waxaa loo yaqaan "Aragtida OGC"
Inta ka hartayna ajandaha juqraafiyeed waxaa ka mid ah bandhigyada sida ugu fiican u ah:
Baro faa'iidooyinka shaqooyinka shaqooyinka geedi socodka madaniga iyo juqraafiyeed, laga bilaabo ujeedada dhismaha
Fiiri sida tiknoolajiyada cusub loo yareeyo waqtiga iibka, iyada oo la fududeynayo iyo isdhexgalka naqshadeynta dhismaha, qorshaynta goobta, horumarinta iyo hawlaha.
Ka qaybgal dabagal ku aaddan hababka ugu wanaagsan ee horumarinta dhulka
Ka ogow faa'iidooyinka istiraatiijiyadeed ee hay'adaha maamulka xogta
Dib u eegista isbeddellada ugu dambeeyay ee soo saaridda khariidadaha, daabacaadda iyo tiknoolajiyadaha daabacaadda ee shabakadda ee qaabka dawladda.
Raadi horumarinta ururada ilaaliya cadastar sharciyeed, ha ahaato heerka gudaha, gobolka ama heer qaran.
Fikradaha isweydaarsiga iyo talo soo jeedin ku saabsan Bentley
Ogaanshaha GIS ah jiilka xiga Bentley Map iyo Bentley (oo horay Microstation Geographics), Bentley Geospatial Server, Bentley Cadastre (Maamulaha Geospatial la codsiyada friendlier XFM) iyo nooca ugu dambeeya ee Bentley Geo Web Publisher (VPR friendlier?)
Shirku wuxuu ka dhici doonaa 28 ilaa 30 bisha Maajo, Maryland, Pennsylvania, iyo shirku kama jiri doono Yurub sannadkan.
Post Previous«Previous Faafaahinta Faylka
Post Next 13 AutoCAD 2009 VideosNext »